It နည်းပညာစာတမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း — MYSTERY ZILLION
It နည်းပညာစာတမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
MyanmarING ဆိုသည်မှာ Myanmar Internet and Networking Group ဖြစ်ပါသည်။ MyanmarING သည် Asia Pacific Networking Group (APNG) အဖွဲ့ကြီး၏ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တွင်မူ MyanmarING သည် Myanmar Egress ကျောင်းသားဟောင်းများ ဦးစီးဆောင်ရွက်သော Project တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
MyanmarING အဖွဲ့သည် အောက်ပါခေါင်းစဉ် ( ၃ ) ခုဖြင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
Dumbo and Live E!
ယင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲသို့ ကွန်ပျူတာပညာရပ်အား စိတ်ဝင်စားသူ လူငယ်များ စာတမ်းတင်သွင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ တင်သွင်းလာသည့် စာတမ်းများအနက်မှ စာတမ်း ( ၃၀ ) ကို MyanmarING မှ စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် ရွေးချယ် သွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာတမ်း ( ၃၀ ) အနက် အကောင်းဆုံးနှင့် အချက်အလက်အပြည့်အစုံဆုံး စာတမ်း ( ၂ ) စောင်ကို ရွေးချယ်၍ ဆုရွေးချယ်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ခံရသည့် ( ၂ ) ဦးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် ကျင်းပမည့် Asia Pacific Networking Group ( APNG ) မှ စီစဉ်သည့် International Camp သို့ MyanmarING ကိုယ်စား တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလျှင် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်သက်ရာဘာသာဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
စာတမ်းတစ်စောင်လျှင် တစ်ဦးသာ ပါဝင်ရေးသားပြီး စာတမ်းတင်သွင်းသူသည် အသက် ( ၃၅ ) နှစ် မပြည့် သေးသူ ဖြစ်ရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ကွန်ပျူတာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာတစ်ခုခု ရရှိ/ တက်ရောက်ဆဲ ဖြစ်ရမည်။ သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာနယ်ပယ်တွင် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ရမည်။
စာတမ်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားကြောင်း ဝန်ခံချက်ဖြင့် အောက်တိုဘာ ( ၃၁ ) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်။
Myanmar Internet Network Group
Thamada Business Suite,Thamada
Hotel ,Yangon ,Myanmar
MyanmarING ဆိုသည်မှာ Myanmar Internet and Networking Group ဖြစ်ပါသည်။ MyanmarING သည် Asia Pacific Networking Group (APNG) အဖွဲ့ကြီး၏ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်မူ MyanmarING သည် Myanmar Egress ကျောင်းသားဟောင်းများ ဦးစီးဆောင်ရွက်သော Project တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
MyanmarING မှ ခံယူထားသည့် တာ၀န် (Mission) မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အင်တာနက်နည်းပညာအား အားပေး အထောက်အကူပြုရန်နှင့် တည်ရှိနေသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကွန်ယက်၊ အဖွဲ့အစည်းများအား အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရေးပင် ဖြစ်ပါသည်။
MyanmarING ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအား နိုင်ငံတကာ အင်တာနက် အသိုက်အ၀န်းများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်း၀င်မှုရှိစေရေး လမ်းဖွင့်ပေးရန်နှင့် သုတေသီများ၊ စနစ်ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူများ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် ကျောင်းသားများအကြား အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတများ ဖလှယ်ရာ နေရာတစ်ခု ဖန်တီးပေးရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ (Working Groups)
MyanmarING အား လတ်တလောအချိန်တွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -
вЂў	အင်တာနက်နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Internet Technology)
вЂў	အင်တာနက် ဓလေ့ထုံးစံများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Internet Culture)
вЂў	Dumbo နှင့် Live E! software များဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
MyanmarING အနေဖြင့် အင်တာနက်နှင့် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း (networking) အကြောင်းအရာများအား စိတ်ပါ၀င်စားမှုရှိသည့် ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိသူ မည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားကိုမဆို အဖွဲ့၀င်အဖြစ် ၀င်ရောက်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
вЂў	MyanmarING ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပါ၀င်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
вЂў	ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အ၀န်းမှ ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်ပါမည်။
вЂў	APNG ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
вЂў	နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများ ရရှိပေမည်။
вЂў	APNG ၏ အခြားသော နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များနှင့် project များ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိနိုင်ပါမည်။
MyanmarING သည် ယခုနှစ် (၂၀၀၈ ခုနှစ်) တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြည်တွင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ရပ်ကို စတင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် အသက် ၃၅ နှစ်အောက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော မြန်မာလူငယ် ၃၀ တက်ရောက် စာတမ်းဖတ်ခွင့် ရကြမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအခမ်းအနားသို့ အိုင်တီနယ်ပယ်အတွင်းမှ ထူးချွန်ကျောင်းသားများအား ဖိတ်ခေါ် လေ့လာခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲမှ အကောင်းမွန်ဆုံး စာတမ်းရှင် ငါးဦးအား MyanmarING မှ ရွေးချယ် ဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကာ ထိုငါးဦးအနက်မှ အထူးချွန်ဆုံးနှစ်ဦးအား ၂၀၀၉ ခုနှစ် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူတွင် ပြုလုပ်မည့် APNG ၏ နိုင်ငံတကာ စာတမ်းဖတ်ပွဲသို့ MyanmarING ကိုယ်စား စေလွှတ် တက်ရောက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
MyanmarING အနေဖြင့် APNG ၏ အခြားသော နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး MyanmarING အဖွဲ့၀င်များအား project များတွင် အမြဲတွေ့ဆုံ ဆောင်ရွက်သွားစေခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံများ၊ ယုံကြည်ချက်များ ရရှိစေကာ ၎င်းတို့၏ အသိပညာများအား နိုင်ငံအတွက် အသုံးချနိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ သုတေသနများ ပြုလုပ်ကာ International အဖွဲ့အစည်းများသို့ project proposal များ တင်သွင်းကာ သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့် သုတေသနခေါင်းစဉ်များအား ပိုမို စုံလင်များပြားလာအောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲများတွင်လည်း အရေအတွက် ပိုမိုလက်ခံနိုင်ရန်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက အခြားမြို့များတွင်ပါ ကျင်းပသွားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။